Raadiyo Ergo wuxuu maalin walba u baahiyaa bulshada ku hadasha afka Soomaaliga ee ku nool gobolka warar sugan oo bani’aadamnimo iyo macluumaad dhammaantood ku baxaya afka Soomaaliga. Macluumaadkaas wuxuu isugu jiraa kuwo ay soo ururiyaan weriyeyaal deegaannadooda kasoo warrama iyo soo-saareyaasha Raadiyo Ergo.
Ujeeddadeennu waa inaan cod siinno bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, abuurnana hab wanaagsan oo ay ula xiriiraan hay’adaha caalamiga ah ee arrimaha bani’aadamnimo ee doonaya inay iyaga caawiyaan. Waxaan dhegeysteyaasha u gudbinnaa xog iyo macluumaad muhiim u ah noloshooda si ay go’aanno xog-ogaalnimo leh uga gaaraan arrimaha noloshooda quseeya.
Ereyga –Ergo – wuxuu macno iyo qiimo weyn ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo afka Soomaaliga. Wuxuu xambaarsan yahay macnaha aasaaska dhexdhexaadinta ama ergeynta taasoo ay dani ugu jirto dadweynaha u baahan, iyo waxaa xataa loo celin karaa macno ahaan oo ay noqon kartaa kuwa u kaca inay xalliyaan iska hor imaadyada.
Raadiyo Ergo waxaa maamula hay’adda aan faa’iido doonka aheyn ee International Media Support (IMS) oo fadhigeedu uu yahay Copenhagen. Xilligaan Raadiyo Ergo waxaa si ballaaran u maalgeliyay hay’adda horumarinta Swiss Development Cooperation (SDC), Hay’adda Qaxootiga ee Denmark oo taageero ka heleysa USAID-OFDA iyo hay’adaha gargaarka isku-dhafka ah ee Soomaaliya, Common Humanitarian Fund (CHF).